Xalaal Safarka Bihac - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Degmada Bihać waxay degtaa aag dhan 900 km2 oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 70,000 oo muwaadiniin ah. Ilaa waqtiyadii hore, booska juquraafi ahaan iyo xaaladaha cimilada wanaagsan waxay ku habboonaayeen degitaanka gobolkan. In kasta oo cilmi-baarista ku saleysan qodista iyo haraaga badan la sameeyay dhawaan, haddana waxay shaaca ka qaadday joogitaanka aadanaha ee Da'da Da 'weyn, Da'da Maarta, Dabayaaqadii iyo Da'da Birta Hore. Jiritaanka qabiilka Japodes ee aaggan dhab ahaan waa la cadeeyay. Dhaqanka Jabodes wuxuu ku calaamadeeyay Bihać qiimayaashiisa aan caadiga ahayn iyo dhaxalkii hore. Waxay ku bilaabantay xalka dhismaha guryaha ee jaranjarooyinka, dahabka ka samaysan naxaasta, birta, qalinka iyo "fardooleyda Japodes". Natiijooyinka qadiimiga ah ee laga helay meelo badan sida Bihać, Golubić, Pritoka iyo Ripač waxay tilmaamayaan astaamaha gaarka ah ee dhaqanka Illyrian ee deegaanka Japodes.
Webiga Una wuxuu qeexay Bihać, magaalada iyo degmada qarniyo badan. Meelaha biyo-dhaca ah ee Štrbački buk iyo Martinbrod ayaa si weyn loo yaqaan. Dooxad u dhow biyaha Una, iyo dooxada sare ee Una River ayaa ah beero qaran tan iyo 2008. Bihać xagaa kasta waxay martigelisaa Una Regatta oo ay weheliso dhacdooyin dhaqameedyo badan.
U duuli Bihać
Bihać waxay ku taalaa oo kaliya 17 km xuduuda Croatia, taas oo siisa goob juqraafi ah, una dhow magaalooyinka waaweyn ee Yurub. Bihać waxaa lagu tagi karaa diyaarad, iyada oo loo marayo dhulka Croatia, garoonka diyaaradaha ee Zagreb, oo ku yaal 170 km, qiyaastii 3 saacadood oo baabuur ah ayaa looga kaxeeyaa magaalada Bihać. Haddii aad go'aansato inaad ka soo gudubto garoonka diyaaradaha ee Sarajevo, Bihać waxay ku taal 350 km, qiyaastii 4 saacadood oo baabuur wadid ah oo dhex marta Travnik, Jajce, Mrkonjic Grad, Kljuca iyo Bihać, taas oo ku siinaysa fursad qaas ah oo aad ku sahamiso aagagga Bosnia iyo Herzegovina.
Ugu safro Bihać gaari ahaan
Bihać waxaa lagu gaari karaa gaari dhammaan jihooyinka yurub, iyadoo aan loo eegin haddii ay ka imaaneyso Galbeed, Bariga, Waqooyiga ama Koonfurta. Haddii laga yimaado galbeedka Yurub, dhammaan waddooyinka waaweyn ee loo maro Bihać waxay sii marayaan Croatia, Slovenia iyo Austria. Haddii aad ka timaaddo Woqooyiga waxaad sii maraysaa Croatia, Bariga ka timaaddaa Serbia, ama jihooyinka Hungary, Romania iyo Bulgaria siday u kala horreeyaan. Imaatinka Koofurta wuxuu u baahan yahay safar saaran doon ka sii gudubta Talyaaniga una gudubta Croatia iyo Bosnia iyo Herzegovina.
Daawashada daawashada ee Bihać
Beerta Qaranka Una. Saacadaha furitaanku way kala duwan yihiin xilli ciyaareedkiiba. Beertan weyn ee qaran ee cusub ayaa ilaalineysa aagga agagaarka webiga Una. Waxay leedahay biyo-dhacyo badan, waddooyin lagu tamashleeyo iyo xitaa tuulooyin yar oo ka mid ah fauna iyo dhir fara badan. Waxaad ka soo geli kartaa baarkinka lix marin oo kala duwan. Hubso inaad hubiso khariidada iyo faahfaahinta bogga, ama xarunta macluumaadka dalxiiska ee ku taal bartamaha Bihać. Albaabka ugu dhow Bihać waxaa lagu magacaabaa Gorjevac. Štrbacki Buk 6 kuna, Martin Brod 2 kuna. Waa bilaash haddii magacaagu Una yahay. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Halkee laga joogaa Bihać
Hoyga Hanka, Ćehajića Mahala 1. Daqiiqado yar bay u jirtaa baska iyo xarunta tareenka 50 iyo laba jeer / 30 kali ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Guriyeynta Una Rosa, Krupska 28. Hoyga kaliya ee Bihac, seddex qol oo ku yaal guri qurxan oo ku yaal webiga Una. Qol € 12, Labo laab € 25. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Beerta, Petog korpusa 3 (oo ku taal Bartamaha magaalada agteeda baarkinka). Huteelka waxaa lagu qalabeeyay baar, qol shirar oo ay fadhiyi karaan 250 qof, maqaayadda pizza iyo maqaayad caadi ah, kafateeriga laamiga (kuraasta 300 qof), iyo baarkin la ilaaliyo oo labanlaab ah 60 labalaab ah, 35 keli ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Huteelka Sedra, Ostrožac na Uni (bidix bidix webiga Una jihada Cazin (12 km ka Bihac iyo Cazin)). Hal, qolal laba jibbaar ah iyo qolal ku habboon oo bixiya illaa 180 sariirood. Laba makhaayadood, baarar, iyo sidoo kale dhul isboorti iyo goobo madadaalo. Agagaarka buuraha ku hareeraysan iyo webiga ayaa leh aragti aad u wanaagsan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Opal, Krupska bb. 20 laba jibbaar, 2 saddex jibbaar ah, 3 qol oo hal keliya ah iyo hal qol oo loo yaqaan "Una". Qolalka oo dhami waa hawo-qaboojiye, oo ku qalabaysan telefishanka telefishanka, internetka iyo baarka yar. Dhismooyinka hudheellada waxaa ka mid ah maqaayada "Obala" oo leh 120 kursi iyo teeraar oo ku teedsan wabiga Una. 76 laab, 51 kali. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Ka gudub xadka Croatia oo booqo Beerta Qaranka ee caanka ah ee Plitvice Lakes, ama u sii gudub Bosnia-Herzegovina xagga Banja Luka iyo Sarajevo.
eHalal Safarka Mart > Boosniya iyo Herzegovina Xalaal Safar > Xalaal Safarka Bihac
Tilmaamaha Safarka ee Bochum Halal